Pisa ၎င်း၏ကျော်ကြားဆုံးခရီးသွားများအတွက်ပုံးစာရင်းပေါ်ဖြစ်ပါသည် ပိန်မျှော်စင်, စန်တာမာရီယာ Assunta နှင့်အခြားထူးခြားတဲ့ဆိုဒ်များဘုရားရှိခိုးကျောင်း. ဒါပေမယ့်မြို့သူ့ဟာသူ, ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် ARNO မြစ် ချ. ဝေဖန်, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တန်ဖိုးရှိတစ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်! ကောင်းတဲ့အရေအတွက်ရှိတယ် အသေးစားပြတိုက် အထဲကစစ်ဆေး, လည်းပဲ ဥယျာဉ်. အဆိုပါ Palazzo Blu လညျးအရေးကွီးခေတ်သစ်အနုပညာရှင်များ monographic ပြပွဲရရှိထားသူ (Chagall, Miro နှင့်မကြာသေးမီက Toulouse Lautrec တို့နဲ့). အစဉ်အမြဲ Keith ယုန်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုနောက်ဆုံးအနံရံထွက်ရှာဖွေရေးပြုပါ, ကိုခေါ် Tuttomondo.
လူကြိုက်အများဆုံးနေ့တစ်ခုမှာမီးရထားဖြင့် Florence မှစ. Trips Siena ရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့ Palio ကျော်ကြားသည်, အဆိုပါအညီအမျှကျော်ကြား Piazza del Campos မှတဆင့်ပြေးတဲ့မြင်းပြိုင်ပွဲရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစက၎င်း၏လှပသောအဘို့အလူသိများသည် အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ အခြားအမှုအရာတို့ကိုကြား. Siena နှင့်ပြည့်စုံရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်၏ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေကို ခံရ. က်ဘ်ဆိုက်များ နှင့်တစ်ဦးအလည်အပတ်ရကျိုးနပ်သည်!
အဆိုပါ Chianti ဒေသတွင်း၌တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့မြို့, Greve သမိုင်းတွေအများကြီးနှင့်အတူတစ်ဦးက hidden ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါသည်, ထုံးတမ်းစဉ်လာများ, နှင့် စပျစ်ရည်ကိုများများ ယဉျကြေးမှု. Greve ယင်း၏မှုပညာရှငျနှငျ့စျေးဆိုင်စူးစမ်းခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ဖို့ကို Florence ကနေပြီးပြည့်စုံသောနေ့ကခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်, ကဖေးများနှင့် ကော်ဖီဆိုင်များ. သင်တစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးနေ့အဘို့ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, Greve သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောရှေးခယျြမှုဖြစ်နိုင်သည်.
Saturnia မြောက်ပိုင်းဗဟိုအီတလီနိုင်ငံ Tuscany အတွက် spa မြို့ဖြစ်ပါသည်. အပန်းဖြေခြင်းနှင့် unwind ရန်ပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီး. အဆိုပါအပူ ရေပူစမ်း Saturnia တွင်ချိုင့်ဝှမ်းအလယ်၌ရှိသောဆာလဖာစမ်းရေများဖြစ်ပြီးသူတို့၏ကုထုံးဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများကြသည်, အပန်းဖြေရာပူဇော်သက္ကာကိုကောင်းစွာအားလုံးနေ့ရက်ကာလ၌နှစ်မြှုပ်ခြင်းမှတဆင့်ဖြစ်ခြင်း.
သငျသညျကို Florence မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင် Renaissance အနုပညာချစ်သောကြောင့်,, Arezzo တက် hit, တစ်နာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့ကွာရထားပေါ်တွင်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားများအတွက် ရှုထောင့်. Francesc Piero, အဘယ်သူ၏ Urbino ၏ Duke နဲ့ Duchess ၏ပုံတူကိုသင် Uffizi ထဲမှာမွငျနိုငျ, စန်း Francesco ၏ဤမြို့ကိုအသင်းတော်၌အမြင့်ဆုံးသော Chapel ခြယ်. အဆိုပါရှုပ်ထွေးနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများသံသရာ, စစ်မှန်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပုံပြင်ကိုကိုယ်စားပြု, အစောပိုင်း Quattrocento ၏သြဇာအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်, အနုပညာရှင်အာကာသသူ၏အရူးစိတ်ကူးများထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော (တဦးတည်းအချက်ရှုထောင့်အပေါ်အခြေခံပြီး), ကြက်ဥပုံအကြီးအကဲများနှင့်အတူဣနြေ္ဒကိန်းဂဏန်းများဖြင့်လူနေထူထပ်.
ဘယ်လိုကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ဗင်းနစ်ချွတ်ထားခဲ့နိုင်သည် 10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထားစာရင်း မှစ. Trips? ဗင်းနစ်အများဆုံးရင်ခုန်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် လူကြိုက်များနေရာများ အီတလီမှာ. တူးမြောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ featuring, ဘုံဗိမာန်နှင့် Gothic စတိုင်အဆောက်အဦးများ. ဗင်းနစ် သငျသညျအစဉျအမွဲမြင်ရပါလိမ့်မည်အလှဆုံးမြို့ကြီးများ၏သေချာတဦးတည်းအဘို့ဖြစ်၏. ကစျေးအကြီးဆုံးတဦးဖွစျနိုငျပါတယျသော်လည်း. သင်တစ်ဦးအပေါ်မဟုတ်မှန်လျှင်တစ်ဦးကတစ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတွေထဲကနိုင်ပါတယ် တင်းကျပ်စွာဘတ်ဂျက်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 နေ့ Florence အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-from-florence/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ရထားဖြင့် Strasbourg ရန်ခရီးသွားလာ